I-China Allen Bradley PLC Allen Bradley - Abahlinzeki - i-HuiTong Industry Company Limited google-site-verification=TXg1_WchYlMLB36tKPCkhY02HfKkkQfiMDCP-ksCfHM
Ikhaya > Imikhiqizo > I-Rockwell automation > Allen Bradley PLC
I-Allen Bradley PLC module system enkulu yokulawula ihlinzeka ngobunjalo besakhiwo kanye ne-I / O ehlukahlukene nezinketho zokuxhumana.
Lezi zixazululo zokulawula okunamandla zinikeza amandla asezingeni lomhlaba kusuka kunqubo kuya ekuphepheni kuya ekunyakazeni.
I-Rockwell Allen Bradley enkulu i-automation controllers (PACs) yenzelwe ukusatshalaliswa noma izinhlelo zokusebenza zokulawula futhi inikeze ukuthembeka okuhle kakhulu nokusebenza.
Sine amamojula we-Allen Bradley PLC (kusuka ku-Rockwell automation) ngokulandelayo:
Allen BradleyAmamojula we-PLC Bulletin 1734 I-I-O module I / O amamojuli ahlinzeka ngedijithali, i-analog, kanye nomsebenzi okhethekile I / O ngokungeziwe ku-POT Guard Guard-level I / O. Imodyuli ngayinye inamaphuzu ayi-1 kuye kwayi-8.
Allen BradleyAmamojula we-PLC 1756 amamojuli asuselwa ku-rack ahlinzeka amamojuli we-digital, diagnostic digital, analog, control control, umsebenzi okhethekile I / O amamojula wokubala ukuhlangabezana nezidingo zezicelo ezahlukahlukene.
Allen BradleyAmamojula we-PLC 1762 MicroLogix Expension I / O anikezela ukuguquguquka kokugcina kokushintsha inani nohlobo lwe-I / Os ukwelula amandla e-MicroLogix 1100, 1200, kanye ne-1400 controlers.
Allen BradleyAmamojula we-Plact I / O amamojuli we-PLC 17 angasetshenziswa njengendawo futhi asatshalaliswa I / O for CompactLogix noma compact GuardLogix controllers.
Allen BradleyAmamojula we-PLC 1794 FLEX I / O angasetjenziswa kalula kuzinhlelo zokusebenza kusetshenziswa i-digital, analog, analog ye-HART, nomsebenzi okhethekile I / O, imodyuli ngayinye inamaphuzu ama-4 kuye kwangama-32.
Imikhiqizo yethu module ye-Allen bradley PLC ibanzi kakhulu. Yamukela ucingo lwakho noma usithumele i-imeyili ngqo ngamanani amahle nesikhathi sokulethwa.
Cama-ustomers atenga izingxenye zethu ukonga izindleko ngazoikhwalithi eqinisekisiwe kanye newaranti yonyaka owodwa.
Allen Bradley 1734-IV2 abahlinzeki
Umkhiqizo:I-Rockwell automation Allen Bradley
Incazelo:ISIHLOKO I-module yokufaka yokufaka yedijithali I / O 2 Point Digital
Isimo:I-Brand New, ifektri ivaliwe
Ngo-1734-IV4 u-Allen Bradley
Incazelo:I-AMAPHUZU I / O 4 Point Digital Input Module
Ngo-1734-IV8 u-Allen Bradley
Incazelo:I-AMAPHUZU I / O 8 Point Digital Input Module
Ngo-1734-OA2 u-Allen Bradley
Incazelo:ISIQEPHU I / O 2 Point Digital Output Module
Incazelo:ISIQEPHU I / O 4 Point Digital Output Module
Allen Bradley PLC I-Allen Bradley ethengisa, yokusungula enkulu esitokisini, inikezwa yiHiTong Industry Co; I-Ltd.Ungabe ufuna amanani aphansi amanani we-automation Allen Bradley PLC brandation nge-quotation? Singakunikeza ama-PLCs, ama-Powerflex Drives, ama-VFD, abalawuli beServo, Panelviews.